नेपाललाई कठिन समूहको चुनौती - खेलकुद - साप्ताहिक
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलकै बलिया टिममा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पाउनुलाई के भन्ने ? केही सिक्ने अवसर अथवा फेरि ठूलो अन्तरको हारबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता ? यही दोहोरो धारणाबाट गुज्रँदै नेपाली फुटबल दक्षिण कोरियाको इन्चेनमा हुने एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुनेछ। एसियाडमा सहभागी हुने टिम यू-२३ को हुन्छ र त्यसमा तीन खेलाडी बढी उमेरका पनि हुन सक्छन्।
नेपाली एसियाड टिम सागर थापाकै नेतृत्वमा रहनेछ र अहिले यो टिम दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बंगलादेशमा छ। ढाकामा पहिलो खेल खेलेपछि नेपाली टिम सिलेत जानेछ। बंगलादेशी यू-२३ टिम पनि इन्चेन एसियाली खेलकुदकै तयारीमा छ। यी मैत्रीपूर्ण खेलको नतिजा बराबरी निस्कने तय भए पनि एसियाडमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो हुने हो ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ।
एसियाडमा हुने फुटबल प्रतियोगिताको 'ड्र' हालै मात्र निकालिएको छ र त्यसमा नेपाल जापान, कुवेत र इराकसमेत रहेको समूह 'डी' मा परेको छ। नेपाली फुटबलले लामो समयपछि यति माथिल्लो स्तरका प्रतिद्वन्द्वी पाउन लागेको हो अन्यथा लामो समय नेपाली फुटबलले पेस गर्ने चुनौती दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा माथिका केही टिममा मात्र सीमित थियो।
'इन्चेन एसियाड हाम्रा लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको छ। यो हाम्रा लागि केही सिक्ने अवसर पनि हुनेछ,' कप्तान सागर थापाले बताए। संयोग कस्तो भने नेपालले अन्तिम पटक इन्चेनमै सन् २००३ मा दक्षिण कोरिया जस्तो बलियो प्रतिद्वन्द्वीको सामना गरेको थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय टिमले एसियाकप छनोट खेलेको थियो।
दक्षिण कोरिया भने त्यसको एक वर्षअघि मात्र आफ्नै देशमा भएको विश्वकपको सेमिफाइनल खेलेर उत्साहित थियो। नभन्दै नेपालले दक्षिण कोरियाको हातबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हारका रूपमा १६-० ले पराजय भोग्नुपर्‍यो। एसियाडमा नेपालले १६ वर्षपछि फुटबल खेल्न लागेको हो।
जापानले चार वर्षअघि चीनको ग्वान्जाउमा भएको एसियाली खेलकुदको फुटबलतर्फ स्वर्ण पदक जितेको थियो, त्यसैले नेपालले पहिलो पटक डिफेन्डिङ च्याम्पियनको सामना गर्नेछ। जापानविरुद्धको खेल नेपालको तेस्रो खेल हुनेछ। जापानसँग खेल्नुअघि नेपालले इराक र कुवेतसँग खेलिसकेको हुनेछ। यी दुवै टिम पनि कमजोर छैनन्। इराक १९८२ को एसियाली खेलकुदको स्वर्ण पदक विजेता हो।
इराकले सन् २००६ मा रजत पदक जितेको थियो। त्यस्तै कुवेतले दुईपल्ट एसियाली फुटबलमा रजत पदक जितिसकेको छ। नेपाल सन् १९८२ देखि १९९८ सम्मका एसियाली खेलकुदमा फुटबलतर्फ लगातार सहभागी थियो। त्यसयता भने खराव प्रदर्शनका कारण फुटबलमा सहभागिता जनाउन सकेको थिएन।
नेपाली टिमका प्रशिक्षक ज्याक स्टेफानोस्कीले पनि इन्चेन भ्रमणलाई अनुभव बटुल्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। ज्याक भन्छन्- 'नेपाली फुटबलको ध्यान साफ च्याम्पिनसिपमै केन्दि्रत हुनुपर्छ। त्यहाँसम्म पुग्न तयारी र अनुभव बटुल्ने अवसरका रूपमा एसियाली खेलकुदलाई लिनुपर्छ।' साफ च्याम्पियनसिपको अर्को संस्करण आउने वर्ष भारतमा हुँदैछ।
गल्फको फरक चुनौती
साख फर्काउने चुनौती